पुँजी बजारका बादशाह बफेटका ‘गुरू’ को सुत्र के हो ? - Aarthiknews
पुँजी बजारका बादशाह बफेटका ‘गुरू’ को सुत्र के हो ?
काठमाडौं । विश्व शेयर बजारका ‘बादशाह’ मानिने वारेन्ट बफेटका गुरु बेन्जामिन ग्रामको जन्म सन् १८९४ लण्डनमा भएको थियो । उनले खासमा नाम ग्रोसबौम थियो । पछि संसारको ठूलो शेयर बजार वाल स्ट्रिटको वातावरणमा मेल खाने गरी नाम परिवर्तन गरेका थिए । उनी एक वर्षको छदा उनका माता पिता न्युयोर्कमा बसाई सरेका थिए । उनी ९ वर्षको हुँदा उनका बुबाको मृत्यु भयो । बाबुको मृत्युपछि उनको परिवारले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको थियो । जसको कारण सानै उमेरदेखि आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने उनले लक्ष्य लिएका थिए ।
बुबाको मृत्युपछि परिवार धन्न ठूलै आम्दानी स्रोतको आवश्यकता थियो । सानै उमेरदेखि पढाईमा तेजिलो रहेको उनले कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिसमेत पाए । सन् १९१४ मा २० वर्षको कलिलो उमेरमा ग्रेजुएसन सकेका ग्रामलाई पढाउन प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे । पढाई पूरा गरे लगतै न्युबुर्गरमा रहेको हेन्डरसन एन्ड लोइब नामक कम्पनीमा प्रतिहप्ता १२ डलरमा मेसेन्जर रुपमा काम गरे ।
उनको शुरुवाती काम डेलिभरी ब्यायको रुपमा चेक तथा सेकुरिटीज पुर्याउने, ऋणपत्र निष्काशनको लागि फर्म भर्ने गर्थे । पछि आएर दैनिक रुपमा स्टक मार्केटको न्युज लेटर लेख्न थाले, ग्रामले हुँदा हुँदा स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू विश्लेषण गर्न थाले । निकै मेहेनत गर्ने बानी भएको ग्राम तीव्र रुपमा प्रगति गर्दै सन् १९२० सम्म आईपुग्दा २६ वर्षको उमेरमै उक्त कम्पनीको प्रमुख साझेदारी बन्न सफल भए ।
सन् १९२३ मा कम्पनीको पार्टनरसीप छोडपछि सन् १९२८ मा कोलोम्बियास्थित कलेजमा इन्भेष्टमेन्ट विषय पढाउन थाले । कलेजमा पढाउँदै गर्दा उनका पूर्वविद्यार्थी रहिसकेका डेभिड डोडको सहयोगमा आफूले पहिले पढाएको पाठ्य सामग्री संकलन गरी सन् १९३४ तिर ‘सेकुरिटी एनेलास्सिस्’ नामक प्रकाशन गरे । उनले प्रकाशित गरेको किताब स्टक मार्केटको लागि ‘बाईबल’ साबित हुँदा लाखौं कपी बिक्री भयो । सन् १९४९ मा ग्रामको अर्को पुस्तक ‘द एन्टिलिजेन्ट इन्भेस्टर’ प्रकाशित भयो ।
सन् १९५० तिर कोलम्बियास्थित ग्रामको मातहतमा रहेको स्कुलमा वारेन बफेट भर्ना हुन आएका थिए । उनले शेयर बजारको बारे धेरै कुरा सिके, बफेट विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ग्रामलाई उनले जीवनमा नै प्रमुख प्रेरणा दिने व्यक्ति रहेका बताएका छन् । शेयर बजारका महान खेलाडी वारेन बफेट विभिन्न समयमा उक्त किताबको चर्चा गर्दै चारपटक बढी पढेको बताए छन् । सन् १९७६ मा ८२ वर्षको उमेरमा ग्रामको मृत्यु भएको थियो ।
बेन्जामिन ग्रामले कम्पनीको बिजनेस चक्रलाई अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने प्रमुख ६ कारण मानेका थिए ।
(१) कम्पनी मुनाफा
(२) कम्पनीको स्थायित्व
(३) कम्पनीको वृद्धि
(४) आर्थिक विवरणको आधारमा कम्पनी स्थान
(५) लाभांश वितरण
(६) शेयर मूल्य इतिहास तथा गति
अझ भित्री रुपमा कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि मुख्य कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
– कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्यबाट हुनुपर्ने प्रतिफल ‘क’ वर्गको ऋणपत्रबाट गुणा हुनुपर्ने ।
– मूल्य आम्दानी अनुपात पाँच वर्षको हाई भ्यालुभन्दा ४० प्रतिशतले कम हुनुपर्ने ।
– कम्पनी लाभांश ‘क’ वर्गको ऋणपत्रको प्रतिफलभन्दा न्युनतम दुई/तिहाई बढी हुनुपर्ने ।
– कम्पनीको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा न्युनतम दुई/तिहाई कम हुनुपर्ने ।
– कम्पनी शेयर मूल्य नेट करेन्ट एसेट भ्यालु भन्दा दुई ÷ तिहाई कम हुनुपर्ने ।– टोटल डेविट पनि नेटवर्थ भन्दा कम हुनुपर्ने ।
– करेन्ट रेसियो पनि २ गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने । – कुल डेविट पनि नेट करेन्ट एसेट भन्दा २ गुणाले कम हुनुपर्ने ।
– कम्पनीको कमाई १० वर्षको आधारमा न्यनतम् ७ प्रतिशतले कम्पाउदेड भएको हुनुपर्ने ।
यी सबै ग्रामका वित्तीय सुत्र क्यालकुलेटरको विकास हुनुभन्दा अगाडिका थिए । ग्रामले ति सबै सुत्रको विकास दिमागबाट गर्ने गर्दथे । प्रायः उनले विकास गरेको सुत्रले निकै काम पनि गरेको थियो । धेरै समय पछि उनको कामलाई उनका पूर्वविद्यार्थी रोए वार्ड तथा डा. विल्सन पयनेले सिस्टोमेटिक तरिकाले पुनः बाहिर ल्याए । सन् १९६९ मा रोए वार्ड तथा डा. विल्सन पयने ग्रामको सुत्रलाई कम्प्युटर कोडमा परिवर्तन गरे । रोए वार्डका अनुसार उनले पनि ग्रामको सिद्धान्तअनुसार ४४ प्रमुख कारणको लागि चार कुरा ध्यान दिन्छन् । ‘यीमध्ये क्वालिटी, भ्यालु, ग्रोथ तथा टेक्निकल सबै ग्रामको सिद्धान्तको आधारमा हुन् । एजेन्सीको सहयोगमा
सेयर बजारमा लाग्यो दोस्रो सर्किट ब्रेक, ४० मिनेटको लागि कारोबार बन्द
शेयर बजारमा दोस्रोपटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्यो